Ii-FAQs -IChangzhou Meiko Magnetics Co., Ltd.
Zeziphi iintlobo zeemagnethi esinokuzifumana kuMeiko Magnetics?
Meiko Magneticsigcisa elikhokelayo iimveliso umvelisi kunye nomthumeli e China. Iimveliso zethu zisusela kwiimagnethi ze-neodymium ezibhanjiweyo ukuya kwiindibano ezinxulumene nemagnethi ngeendlela ezahlukeneyo, imisebenzi kunye nokusetyenziswa. Ngaphezulu kwama-2000 iintlobo zezinto zemagnethi zinokukhetha.
Njani malunga nomgangatho wakho umazibuthe?
Sizabalazela ukubonelela ngeemveliso zemagneti ezikumgangatho ophezulu kunye ISIQINISEKISO SONYAKA, ngaphandle kwawo nawuphi na umonakalo owenziweyo nokonakala. Siqinisekisa izinto zethu kunye nomsebenzi. Ukuzinikela kwethu kukwaneliseka zizinto zethu zemagnethi. Kwiwaranti okanye hayi, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukoneliseka ngumntu wonke.
Amaxabiso ethu anokutshintsha ngokuxhomekeke kubonelelo kunye nezinye izinto zentengiso. Kodwa njengoko siphuma kwimveliso yamandla ombane esekwe e-China, sinokunikela ngexabiso elihle lokukhuphisana ukugcina iindleko zakho.
Ewe sifuna zonke iiodolo zamanye amazwe ukuba zibe nobungakanani be-odolo encinci eqhubekayo. Kodwa ukuba ubungakanani bemigangatho yesitokhwe, akukho MOQ yoku-odola kokuqala. Ngolwazi oluthe kratya, nceda unxibelelane nathi.
Ewe, sinokubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya iNgxelo yoVavanyo, iZatifikethi zoHlahlelo / ukuVumelana, i-Inshurensi, iMvelaphi kunye namanye amaxwebhu athunyelwa ngaphandle.
Ngokwesiqhelo kwiintsuku eziyi-7-15 zokuthunyelwa. Ukuba kwizinto eziqhelekileyo, sinokubazisa ngeentsuku ezi-3. Kuba iisampulu ezintsha, ixesha phambili malunga neentsuku ezisi-7. Kuba imveliso mass, ixesha phambili iintsuku ezingama-20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo asebenza xa (1) siyifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela kwiimveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu akhokelayo awasebenzi nomhla wakho wokugqibela, nceda uye kwiimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.